जी न्युजको टोलीलाई कालापत्थरमा पुर्‍याउन ओलीको ‘भिटो’, चौतर्फी आलोचना
२९ पुष २०७७, बुधबार १९:४०
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तर्वार्ता लिन काठमाडौं ओर्लिएको जी न्युजको टोलीले १७ हजार फिटको उचाइमा रहेको कालापत्थर क्षेत्रमा पुगेर सगरमाथामा भारतको दाबी गरेको छ ।
छ महिनाअघि प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को विरोध गरेको जी न्युजको टोली नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भएको समयमा काठमाडौं ओर्लिएको हो । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगको अन्तर्वार्ता सकेर जी न्युजका प्रधानसम्पादक सुधिर चौधरी कालापत्थर पुगेका हुन् । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्‍जमा रहेको कालापत्थरमा हेलिकप्टर लैजाँदा अनुमति लिनुपर्छ ।
तर, जी न्युजका प्रधानसम्पादक रहेका सुधिर सवार हेलिकोप्टर भने बिना अनुमति त्यहाँ पुगेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत भूमिराज उपाध्यायले जानकारी दिएका छन् । उनले निकुञ्‍जसँग कुनै अनुमति नलिएको प्रष्ट पारेका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी हरिभद्र आचार्यले पनि निकुञ्ज क्षेत्रमा भारतीय पत्रकार चढेको हेलिकप्टर अवतरणका लागि कुनै अनुमति नदिइएको बताएका छन् ।
बालुवाटारमा जागेको राष्ट्रवाद कालापत्थरमा अवसान, जी न्युजको निशाना ओलीको सत्ता कि सगरमाथा ?
सार्क मुलुकका नागरिक कालापत्थरमा पुग्दा प्रतिव्यक्ति १५ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्छ भने हेलिकप्टर अवतरण गर्दा तीन हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । त्यहाँ छायांकन गर्दा थप ५० हजार तिर्नुपर्छ । तर, जी न्युजको टोलीलाई भने प्रधानमन्त्री ओलीको ‘भिटो’ मा त्यहाँ पठाइएको पाइएको छ । अन्तर्वार्ताबाट निकै सन्तुष्ट भएका ओलीले सबै कानुनी प्रक्रियालाई मिचेर सुधिरलाई कालापत्थर पुर्‍याउन सहयोग गरेका छन् ।
सुधिर सिम्रिक एयरको हेलिकोप्टरमार्फत् कालापत्थर पुगेका थिए । सिम्रिक एयरका अध्यक्ष अन्‍नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा हुन् । थापा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच पछिल्लो समय राम्रो सम्बन्ध छ । जसका कारण अन्‍नपूर्णमा विष्णु रिमालको आग्रहमा अखण्ड भण्डारीलाई सम्पादक बनाइएको थियो । अन्‍नपूर्णले प्रधानमन्त्री ओलीको बचाउमा समाचारहरु लेख्‍ने गरेको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको छ ।
भाजपा नेताको लगानी भएको जी न्युजमा ओलीको अन्तर्वार्ताको अर्थ ?
तर, हेलिकोप्टरसहित कालापत्थर पुगेर सुधिरले भने सगरमाथामा भारतले दाबी गर्नुपर्ने र यसका लागि ठूलो अभियान चलाउनुपर्ने भिडियो रिपोर्ट छायांकन गरेको सार्वजनिक भएको छ । उनले सगरमाथाको नाम परिवर्तन गर्दै ‘माउन्ट राधानाथ सिकदर’ राख्‍नुपर्नेसमेत दाबी गरेका छन् ।
भीम रावलले गरे आलोचना
जी न्युजको टोली कालापत्थर पुगेर सगरमाथा दाबी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली र सुधिर चौधरीको चर्को आलोचना भइरहेको छ । नेकपा नेता भीम रावलले यस्तो स्थिति सिर्जना गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रहित विरोधी कार्यको अर्को उदाहरण भएको बताएका छन् ।
‘भारतीय प्रधानमन्त्री उमेरले जेठो भए पनि हैसियत बराबर हो, सीमा विवाद वार्तामार्फत हल गर्नुपर्छ’
उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, “नेपालविरोधी अभियान चलाउने भारतीय जी न्युजका सुधीर चौधरीलाई वालुवाटारमा अन्तरवार्ता दिनुका साथै कालापत्थर घुम्ने प्रबन्ध गरि निजले सगरमाथामा ‘भारतले दावी गर्नुपर्छ’ भन्ने जस्तो निन्दनीय अभिव्यक्ति दिने स्थिति सिर्जना गर्नु प्रम केपीको राष्ट्रहित विरोधी कार्यको अर्को उदाहरण हो ।”
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रायोजित अन्तर्वार्ता भएको भन्‍नेहरुले सुधिरको कालापत्थरको भिडियोपछि सामाजिक सञ्‍जालमा चर्को आलोचना गरिरहेका छन् ।